Myanmar agrees to the appointment of H.E. Mr.Qaley Aliyevich Allahverdiyev as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Azerbaijan to the Republic of the Union of Myanmar with residence in Kuala Lumpur – Ministry of Foreign Affairs
The Government of the Republic of the Union of Myanmar has agreed to the appointment of H.E. Mr. Qaley Aliyevich Allahverdiyev as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Azerbaijan to the Republic of the Union of Myanmar with residence in Kuala Lumpur.
Mr. Qaley Aliyevich Allahverdiyev was born in 1950. He studied at the Faculty of Oriental Studies of Baku State University in Azerbaijan.He obtained Candidate of Science in 1985 and PhD in Science in 1993 respectively.He served as Interpreter in Iraq, Syria and Libya as well as scientific researcher in National Academy of Sciences from 1973 to 1994. In 1994, he became the First Secretary in OIC Department, Ministry of Foreign Affairs of Azerbaijan. Then he served in various capacities at the Ministry of Foreign Affairs and at the Embassies of the Republic of Azerbaijan in Egypt, Turkey, Indonesia and Qatar from 1995 to 2009.Since 2013, he has been serving as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Azerbaijan to Malaysia. He is also concurrently accredited as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Azerbaijan to Brunei Darussalam since 2014.
Dated: 15th January 2015.
မစ္စတာ ကယ်လီ အယ်လီယေးဗစ်ချ် အာလာဗာဒီယက်ဗ်အား ကွာလာလမ်ပူမြို့ အခြေစိုက် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော အဇာဘိုင်ဂျန်သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ရန် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရက သဘောတူညီပြီးဖြစ်သည်။
မစ္စတာ ကယ်လီ အယ်လီယေးဗစ်ချ် အာလာဗာဒီယက်ဗ်အား ၁၉၅၀ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ၎င်းသည် အဇာဘိုင်ဂျန်ရှိ ဘာကူးတက္ကသိုလ်၊ အရှေ့တိုင်းပညာလေ့လာမှုဌာနတွင် ပညာသင်ယူခဲ့သည်။၎င်းသည် ၁၉၈၅ခုနှစ်တွင် သိပ္ပံဘွဲ့နှင့် ၁၉၉၃ခုနှစ်တွင် သိပ္ပံ ပါရဂူဘွဲ့တို့ကို အသီးသီး ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၇၃ခုနှစ်မှ ၁၉၉၄ခုနှစ်အထိ အီရတ်၊ ဆီးရီးယား နှင့် လစ်ဗျားနိုင်ငံတို့တွင် စကားပြန်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ အမျိုးသားသိပ္ပံကျောင်းတွင် သိပ္ပံ သုတေသီအဖြစ်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၄ခုနှစ်တွင် အဇာဘိုင်ဂျန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အစ္စလာမ်မစ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ဆိုင်ရာဌာန၌ ပထမအတွင်းဝန်အဖြစ် စတင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး၊ ၁၉၉၅ခုနှစ်မှ ၂၀၀၉ခုနှစ်အထိ အဇာဘိုင်ဂျန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် အီဂျစ်၊ တူရကီ၊ အင်ဒိုနီးရှားနှင့် ကာတာနိုင်ငံတို့ရှိ အဇာဘိုင်ဂျန်သံရုံးများတွင် ရာထူးအဆင့်ဆင့်ဖြင့် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ မေလမှစ၍ မလေးရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာ အဇာဘိုင်ဂျန် သံအမတ်ကြီး အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပြီး၊ ၂၀၁၄ခုနှစ် မတ်လမှစ၍ ဘရူနိုင်းဒါရူဆလမ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ အဇာဘိုင်ဂျန်သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ပူးတွဲ တာ၀န် ထမ်းဆောင်လျက် ရှိသည်။
သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ ကယ်လီ အယ်လီယေးဗစ်ချ် အာလာဗာဒီယက်ဗ်သည် အိမ်ထောင်ရှိပြီး သားသမီး (၃)ဦးရှိသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်။